बाघ चितुवा र मेरो जोड्दा ५, ६ सय छोराछोरी छन | Namastepost.com
बाघ चितुवा र मेरो जोड्दा ५, ६ सय छोराछोरी छन
RECENT NEWS December 19, 2016 ujyaaloonline ,
मेरो नाम निलकुमारी जोन्छे । चिडियाखानामा काम गर्न थालेको ३५ वर्ष भइसक्यो । यहाँ रहेका जनावरलाई हेरचाह गर्नुपर्छ । बच्चा जन्मिए भने स्याहानुपर्छ । चिडियाखानामै जन्मिएको एउटा बाघ अहिले ठूलो भइसकेको छ । उसलाई मैले नै हुर्काएको हो ।
बाघको बच्चा जन्मिँदा उसलाई आफ्नै छोराछोरीलाई झैं काखमा राखेर हुर्काएको याद अहिले पनि ताजै छ । बिरामी छ कि छैन, राम्रो खाएको छ कि छैन भनेर निकै ध्यान दिन्थें । झोक्राएर बस्यो भने टेन्सन हुन्थ्यो । एकदम मायाले हुर्काएको हो ।
बच्चा हुँदा बाघले मासुभन्दा दूध खान्थ्यो । उसको माउको दूधले पुग्दैनथियो । बोतलको दूध खुवाउनुपथ्यों । आमासँग छुट्याएर मैले उसलाई बोतलको दूध खुवाउँथें । । तातो चिसो मिलाएर खुवाउँथे । बाघ, चितुवा, हुँडार धेरै जनावर हुर्काएको छु, स्याहार गरेको छु ।
पहिलोपटक बाघको बच्चालाई हुर्काउँदैछु भन्ने सुन्दा झसँग त भएको भएँ । अनि पछि उसँग चल्दा चल्दा, घुलमिल हुँदा हुँदा केही डर नै लागेन । काखमा लिँदै, दूध खुवाउँदै हुर्काएको । म्वार्इं पनि खाएँ नि, किन नखानु ?
मैले बाघको बच्चा हुर्काएको बेलामा मेरा आफ्ना छोराछोरी सानै थिए । छोरो ८ वर्षको थियो । घर पुग्दा उसले सोध्यो– ममि तपाईं दिनभर बाघको बच्चा खेलाएर आउनुहुन्छ । मेरो माया बढी लाग्छ कि उसको भनेर । अनि मैले भनें–पहिलो प्राथमिकता उसलाई दिन्छु, अनि तिमीलाई ।
अनि छोरोले फेरि प्रश्न ग¥यो–किन त्यस्तो ? आफ्नो छोरो पो ठूलो हुन्छ । अनि मैले भनें–उनीहरुलाई राम्रो स्यहार गरेबापत पाउने पारिश्रमिकले तिमीलाई हुर्काउनुपर्छ । त्यसैले पहिले उसको माया बढी लाग्नुपर्छ ।
मेरो कुरा सुनेर छोरो पनि खुशी भयो, मामुले राम्रो उत्तर दिनुभयो भन्यो त्यो उमेरमा पनि ।
मैले हुर्काएको बाघको बच्चा ठूलो भएपछि पनि मलाई चिन्थ्यो । चितुवाले पनि चिन्छ । हामीलाई कन्याउन दिन्छ । आक्रमण गर्दैन ।
उसलाई बच्चादेखि हुर्काएको । वरपर जानासाथ हामीलाई ड्रेसले पनि चिन्छ । बोलाउने बित्तिकै खुरुरु दौडिएर आउँछ । अनि हामीलाई पनि बढी माया लाग्छ । आफैले हुर्काएकाले होला । के मन पराउँछ, त्यो दिएमा खुशी भएर खान्छ । उनीहरुसँग खेलेर बस्दा निकै रमाइलो लाग्छ ।
सानोमा बाघ मेरो काखमै समेत निदाएको छ । कहिलेकाहीँ बाघको खोरमा जाँदा उसलाई देख्छु । आहा मैले हुर्काएको भन्ने सम्झेर आनन्द लाग्छ । उसले त अहिले बिर्सियो होला, किनकी मैले काम गर्ने सेक्सन अहिले अन्तै छ ।
मलाई त एनिमल मदर अर्थात जनावरको आमा पनि भन्थे पहिला । यसरी चिनाउन पाउँदा मलाई खुशी लाग्छ । हिसाब गर्दा त मेरो ५, ६ सय भन्दा धेरै छोराछोरी होलान् । घरमा भन्दा धेरै चिडियाखानामा ।
अनि मलाई के लाग्छ भने थालीमा टन्न फूल अक्षता राखेर मलाई धर्म हुँदैन । जनावरको स्याहार गरे पो धर्म हुन्छ । किनकी यिनीहरु मागेर खान सक्दैनन् नि । उनीहरुलाई के चाहिन्छ भन्ने बुझेर राम्ररी खान दिन सके, बिरामी हुँदा उपचार गरेर निको पार्न सके पो धर्म हुन्छ ।